Semalt ၏ DSD၊ SEO Dashboards တွင်နောက်ထပ်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုကိုကြည့်ပါ
Semalt ၏ DSD ကိုကြည့်ပါ၊ SEO Dashboards တွင်နောက်ထပ်ကြီးမားသောအချက်တစ်ချက်
Third-party tool များကိုမမှီဘဲသင်၏ကိုယ်ပိုင် SEO စွမ်းဆောင်ရည် dashboards ကိုဖန်တီးရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိလျှင်ကော။ သင်၏ဖောက်သည်များသည်သူတို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးနိုင်သည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှိခြင်းသည်မည်မျှကောင်းသနည်း။ ထောင့်တိုင်းမှာငွေပေးချေမှုတွေရှိတဲ့ Google Data Studio ဒါမှမဟုတ် Ahrefs နဲ့ SEMRush လိုတတိယပါတီကိရိယာများမရှိတော့ပါ။
မိနစ်ပိုင်းအတွင်းထိုကဲ့သို့သော SEO dashboard များထုတ်ပေးသောအသုံးပြုရလွယ်ကူသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိလျှင်ကော။
Semalt တွင်အဖြေရှိသည်။ DSD ဟုလည်းခေါ်သည့် Dedicated SEO Dashboard သည်စျေးကွက်သမားများ၏ပြသမှုနှင့်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင်ယောင်စေသောနည်းလမ်းကိုပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သည်။ သင့်ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာ SEO စွမ်းဆောင်ရည် dashboards ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အနည်းဆုံးအားဖြင့်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံနိုင်အောင်ကူညီပေးမယ့်ကိရိယာတစ်ခု။ ၎င်းသည် Semalt ၏နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်သည်။
Dedicated SEO Dashboard ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ကြပါစို့။ ၎င်းသည်သင့်အားဖောက်သည်များအထင်ကြီးစေရန်နှင့်အရောင်းတိုးမြှင့်စေရန်မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
Semalt ၏အထူး SEO Dashboard ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Dedicated SEO Dashboard (DSD) သည်aစီးပွားဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု -based ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထိပ်ဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Semalt မှဖန်တီးထားသော SEO စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ tracker ။ ၎င်းသည်အေဂျင်စီများနှင့်အလွတ်သမားများအားသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏ SEO လှုပ်ရှားမှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင်ယောင်စေရန်အဖြူရောင်တံဆိပ်တပ်သည့် dashboard များဖန်တီးနိုင်သည်။
DSD သည် Semalt ၏ဇာတိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကိရိယာများမှအချက်အလက်များဆွဲယူပြီး၎င်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြသနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်ပါ ၀ င်မှုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအတွက် All-In-One အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များသည်သူတို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့်လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်ဇယားများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဖန်တီးပေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်အမှုသည်တစ် ဦး အတွက် SEO အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ယူသောအခါ၊ Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs နှင့် RankWatch ကဲ့သို့သောကိရိယာမျိုးစုံမှအချက်အလက်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထုတ်ယူပြီး၎င်းတို့ကိုတင်ဆက်မှုတစ်ခုတွင်စုစည်းလိုက်သည်။ Google Data Studio သို့မဟုတ် Microsoft Power BI သို့မဟုတ် Tableau ကဲ့သို့သောမြင်နိုင်သောကိရိယာများကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခုဤအရာသည်ထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေအမြောက်အများယူနိုင်သည်။ ဟုတ်လား
ယခုဤအရာအားလုံးကိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်စနစ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားပါ။ ဒါက DSD၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာလာမယ့်ကြီးမားပြီးအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သူတို့ဖောက်သည်တွေကိုအထင်ကြီးစေနိုင်ပြီးသူတို့ဆီကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိုမိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်အောင်အေဂျင်စီတွေနဲ့အလွတ်တန်းတွေအတွက်တည်ဆောက်ထားတာပါ။
DSD ကိုအဓိကအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းသုံးမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းကိုဖန်တီးရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသော်၎င်းကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းတွင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီမှာအွန်လိုင်းစက်ရုံအတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ DSD ကိုကြည့်ပါ။ ပင်မစာမျက်နှာ၏နေရာတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာများနှင့်အကဲဖြတ်မှုပေးသည့် dialog ပါဝင်သောအခြေခံ layout ။ ဘယ်လောက်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေ!
ပုံ ၁ - အွန်လိုင်းစက်ရုံအတွက်ဖန်တီးထားတဲ့အပ်နှံထားတဲ့ SEO DASHBOARD
DSD ၏အဓိကအပိုင်း (၃) ခုမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Google SERP Analysis - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများ (SERPs)၊ အသွားအလာ၊ ထိပ်တန်းသော့ချက်စကားလုံးများနှင့်အကြောင်းအရာများ၊ သော့ချက်စာလုံးတစ်လုံးအတွက်ရာထူး ၁၀၀ နှင့်အခြားထိုးထွင်းသိမြင်မှုများအကြောင်းအားလုံး။
နည်းပညာဆိုင်ရာ SEO စာရင်းစစ် - သင်စာရင်းစစ်မှုအတွက်တတိယပါတီကိရိယာများပေါ်တွင်မှီခိုစရာမလိုပါ။ DSD သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကျယ်ပြန့်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုပြုလုပ်ပြီးတိုးတက်မှုနယ်ပယ်များကိုပြသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏အမြန်နှုန်းကိုစစ်ဆေးပါ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွားခြင်းအစီရင်ခံစာ၊ အကြောင်းအရာမူရင်း၊ hosting ပြissuesနာများ၊
SEO စွမ်းဆောင်ရည်အစီရင်ခံစာများ - သင်၏ SEO လုပ်ဆောင်မှုအားလုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြရန်နည်းလမ်းသစ်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်တွဲဖက်ထားသောအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးရှုခင်းတွင်သင်၏ဖောက်သည်များကိုပြပါ။
PDF နှင့် CSV အစီရင်ခံစာမီးစက်
သင်၏ဖောက်သည်၏ SEO ခရီးစဉ်၏အဆင့်တိုင်းတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်သင်သုံးနိုင်သောကိရိယာများစွာရှိသည်။ client အသစ်တစ်ခုကို onboarded? ဘာကြောင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုမှစတင်ပြီးတိုးတက်မှုနယ်ပယ်များကိုရှာဖွေမလဲ။ Semalt ၏အပ်နှံထားသော SEO Dashboard သည်သင့်အားဝက်ဘ်ဆိုက်၌မှန်ကန်သော၊ မှားယွင်းနေသောအရာများနှင့်၎င်း၏အားသာချက်ကိုတိုးတက်အောင်နည်းလမ်းများနှင့်အတူမျက်လုံးကြည့်ရှုမည်။
သို့မဟုတ်ယနေ့ခေတ်တွင်ရှာဖွေမှုအများဆုံးကိရိယာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သော plagiarism checker ကိုအသုံးပြုပါ။ သင့် client ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့ ၀ င်ရောက်သောအကြောင်းအရာတိုင်းကိုသင်လိုချင်သည် 100% ထူးခြားတဲ့နှင့်စစ်မှန်သော။ သင်မူပိုင်ခွင့်ရယူရန်သို့မဟုတ် DMCA ဖယ်ရှားရန်တောင်းဆိုမှုများကိုမရရှိနိုင်ကြောင်း DSD ကအတည်ပြုနိုင်သည်။ DSD ကသင့်ကိုထိုနည်းဖြင့်ကာကွယ်ပေးသည်။
ဤနေရာတွင်သတိပြုရမည့်အချက်မှာ Semalt's DSD ကိုရွေးချယ်သောအခါထိုအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုအခမဲ့ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ် (FREE, LITE နှင့် PRO) သုံးခုထဲမှတစ်ခုသာစာရင်းသွင်းပြီး DSD ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုစတင်ခံစားရမည်။
FREE - အထွေထွေစာရင်းဇယား၊ နေ့စဉ်မက်ထရစ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သုံးစွဲသူ၏တောင်းဆိုမှု ၁၀ ​​ခုအထိ
LITE - Lead မျိုးဆက်နှင့်ထုံးစံ JS ကုဒ်စွမ်းရည်
PRO - အခမဲ့နှင့် LITE ပရိုဂရမ်များမှရွေးချယ်မှုများ + LeadGen ဒေတာဘေ့စ်ကိုအသုံးပြုခြင်း
ဤအဆင်ပြေမှုအားလုံး၏နောက်ကွယ်တွင်အလုပ်များများပြားလာသည်။ Semalt's Dedicated SEO Dashboard သည်တစ်ခုတည်းသော dashboard များဖန်တီးရန်စီးပွားဖြစ်ကိရိယာများနှင့်ဒီဇိုင်းစနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။ dashboard အသစ်ကိုဖန်တီးတိုင်းလိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဒိုမိန်းခွဲကိုလက်ခံရန်ဒိုမိန်းခွဲတစ်ခုကိုဖန်တီးသည် (ဥပမာ၊ https://seo.marcelino.si/ )
SD •သူ DSD Admin Panel ကိုသက်ဝင်သည်။ ၎င်းသည်မတူညီသောဖောက်သည်များအတွက်စိတ်ကြိုက်အစီရင်ခံစာများဖန်တီးရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်သင်သည်အချက်အလက်မှတ်များကိုထည့်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခြေရာခံသည်
သင်သည် dashboard ကို client နှင့်မျှဝေပြီးစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်
ပုံ ၂ - DSD ၏အောက်ခြေနှင့်စိတ်ကြိုက်ကြည့်ရှုရန်ပုံ ၂
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ကြိမ်သာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ ပြီးနောက်သင်ထိန်းချုပ်ခလုပ်ကိုလုံး ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ DSD Admin Panel သည်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်၊ သင်အသုံးပြုမည့် client data များကိုထည့်သွင်းရန်နှင့်မက်ထရစ်ကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
Semalt ၏ Dedicated SEO Dashboard တွင်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များကိုနောက်ကွယ်မှချန်ထားသည့်အင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ ဤတွင်၎င်း၏ထိပ်တန်းအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုစာရင်းဖြစ်ပါတယ်
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်; ထက်နည်း 15 မိနစ်၌တည်၏
SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသခြင်းဖြင့် ၀ င်ငွေနှစ်ဆဖြစ်စေခြင်း
အလွန်ကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သော
ပုံ ၃ - SEMALT ၏ DSD နှင့်ကိရိယာများကို UBERSUGGEST, AHREFS, SEMRUSH နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
သင်၏စီးပွားရေးအတွက် DSD အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် DSD ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အစီရင်ခံစာပြုစုရေးကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်သာမကသင်၏လုပ်ရပ်များသည်ဖောက်သည်၏ SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းပြသရန်ကူညီပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရဲ့ run ကာလအတွင်းထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းအရာနှင့် session ကိုကြာချိန်အဖြစ်တိကျတဲ့ဒေတာအချက်များနှင့်မက်ထရစ်အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Semalt's Dedicated SEO Dashboard ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
သင်၏အတိတ်က ၀ န်ဆောင်သူများ၏နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့်နည်းစနစ်များကိုပြသခြင်းဖြင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ပါ
အားလုံးမက်ထရစ်ကိုခြေရာခံများအတွက်တစ်နေရာတည်းမှာ - ဖြေရှင်းချက်
သငျသညျမဟာဗျူဟာနှင့်ကွပ်မျက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့် DSD ထားရန်စွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာခြင်းချန်ထားနိုင်ပါတယ်
၀ န်ဆောင်မှုတောင်းခံသူများကို DSD မှတိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါ
Semalt Reseller အစီအစဉ်ကိုဖြည့်စွက်သည်
Semalt ၏ DSD သည်မဟုတ်
ငါတို့ရဲ့အထင်ကရထုတ်ကုန်တွေကိုလည်းရောင်းတယ်၊ AutoSEO နှင့်
FullSEOရှုပ်ထွေးတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင် DSD ဆိုတာကတခြားထုတ်ကုန်တွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်တဲ့သီးခြားစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်အဆင့်မြင့်သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်မှုအခြေခံသည့်မြင်သာမှုနှင့်သတင်းပေးပို့မှုပုံစံကိုသင့်ဖောက်သည်များအားသင်၏စွမ်းဆောင်ချက်ကိုပြသရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်၏အခြားကိရိယာများအတွက် DSD ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့သော် singular entity တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည် dashboard တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ Semalt မှပေးသောအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
Third-party tools များပေါ်တွင် မူတည်၍ သင်ရပ်တန့်ပြီးပိုမိုမတ်မတ်၊ ပို၍ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်၊ ပိုမိုတတ်နိုင်သော၊ သုံးစွဲသူများအလိုအလျောက်ရသည့်လမ်းအသစ်များကိုစူးစမ်းရန်အချိန်ရောက်လာသည်။ Semalt မှ Dedicated SEO Dashboard ကိုယနေ့စစ်ဆေးပါ။ တောင်းဆိုမှုaယခုအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေး။